Goobaha Khadka Tooska ah ee Joorjiyaanka - Xeerarka gunnada ee Khadka Tooska ah ee Khadka
(946 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ...Georgia waa mid ka mid ah dalalka yar ee Koonfurta Caucasus, halkaas oo khamaaristu ay tahay mid sharci ah. Warshadaha khamaarka ee dalka ayaa dib ugu soo laabtay maalmihii NEP, markii casaankii ugu horreeyay laga furay Tbilisi. Si kastaba ha noqotee, waxay jireen muddo dheer (seddex sano) waxayna si tartiib tartiib ah u rogeen hawlahooda Maajo 1928, markii dhammaan howlaha khamaarka ee ka jira dhulkii Midowgii Soofiyeeti la mamnuucay.
Waqtigaas, labadaba deriska Turkiga, Ruushka iyo Azerbaijan, ganacsiga khamaarka ayaa ku jira xaalad aad u adag, casinos-ka Georgia waxay u furan yihiin dhammaan dadka soo socda. Si kastaba ha noqotee, arrinta khamaarka iyo gaar ahaan dhibaatooyinka la xiriira khamaarka, ayaa marwalba kor u kacaya. Waddanku wuxuu si joogto ah uga hadlaa sharci dajiyayaasha iyo muwaadiniinta caadiga ah ee ku saabsan dhinaca xun ee khamaarka.
Aragtida guud ee dadweynaha ee ku saabsan khamaarka wanaagsan, dad badan ayaa doorta khamaarka mid ka mid ah howlaha ay ugu jecel yihiin. Daraasad kiis oo dhowaan la sameeyay ayaa xaqiijinaysa in dadka reer Georgia ay si togan ula xiriiraan khamaarka. Georgians waxay fahamsan yihiin in casinos ay soo jiitaan raasamaal shisheeye oo aad loogu baahan yahay, oo ay la socdaan ciyaartoy dalxiisayaal ah.
Baarlamaanka Georgia wuxuu hadda tixgalinayaa sharci qabyo ah oo looga dan leeyahay yareynta saameynta xun ee khamaarka. Soo jeedintu waxay inta badan la xiriirtaa xaddidaadda marin u helka qamaarka iyo hay'adaha kale ee khamaarka ee dadweynaha maxalliga ah, iyadoo la tixgelinayo mushaharka. Waxaa loo soo jeediyay in loo ogolaado khamaarka kaliya muwaadiniinta mushaharkoodu gaaro ugu yaraan 500 GEL, oo ​​aan ka yareyn 5000 GEL akoonadooda bangiga. Soo-jeedinta weli waa la tixgelinayaa.
Khamaarka internetka ee Georgia gabi ahaanba waa sharci. Muuqaal gaar ah oo ka mid ah waaxdan waddanka ayaa ah xaqiiqda ah in dhammaanba casinos-yada dhulka ku yaal ay leeyihiin goobahooda casino ee khadka tooska ah. Warshadaha khamaarka internetka ee Georgia waxay ka shaqeeyaan tiro ka mid ah hawl wadeenada maxalliga iyo ajaanibta ah, maadaama shuruudaha helitaanka rukhsad si waafaqsan sharciga khamaarka internetka ee Georgia ay yihiin kuwo fudud. Ciyaar ciyaar khamaarka khadka tooska ah ee Georgia wuxuu noqon karaa naadiyo is-dhexgal gaar ah oo matalaya qolalka kombiyuutarada ku xiran internetka lana dejiyey goobaha casino ee gudaha iyo dibedda ee stvu.
Dadka reer Georgia waxay jecel yihiin inay ku ciyaaraan casinos-ka internetka ee naadiyada noocan oo kale ah, laakiin hadda dad aad u tiro badan ayaa u adeegsanaya ujeeddada aaladda guriga - kombuyuutarrada, moobaylka iyo wixii la mid ah.
Georgia Online - Khamaarka Georgia
Georgia - waa dal qorax leh oo leh dabeecad qurux badan iyo xaalado wanaagsan oo loogu talagalay madadaalada iyo dalxiiska. Cunnooyinka maxaliga ah iyo cunnooyinka qurxinta, iyo sidoo kale soo dhoweynta dadka ayaa soo jiidatay dalkan iyadoo ay la socdaan dadyowga adduunka oo idil. Shuruudaha khamaarka ee qaabka dhulka ku saleysan, iyo khadka tooska ah ayaa u oggolaanaya ku filan inuu ku raaxeysto ciyaarta. Laakiin gadaal ayaan ka hadli doonnaa. Marka, CasinoToplists ayaa loo diray Tbilisi!
Sidee loo ciyaaraa khamaarka internetka? Tilmaam tallaabo-tallaabo ah;
Khamaarka khadka tooska ah ee Georgia - taariikhda taariikhiga ah
1801 - 1922 Georgia waa qayb ka mid ah Boqortooyada Ruushka waxayna raacdaa shuruudaha la xiriira khamaarka. Sannadkii 1918, muddo kooban oo madax-bannaanida ah, iyo 1922, oo ay weheliyaan Armenia iyo Azerbaijan waxay qayb ka noqdeen Jamhuuriyadda Hantiwadaagga Federaaliga Transcaucasian Soviet. Sanadkii 1920 magaalada Tiflis waxay leedahay 2 casinos oo waxay ka furtay warshad u gaar ah soo saarista kaararka lagu ciyaaro. Qodobka 235 ee Xeerka Ciqaabta ee GSPC ee ka dhanka ah abaabulka falalka khamaarka sharci darrada ah - xabsi illaa 3 sano, iyo la wareegis suurtagal ah oo hanti ah.
1959 Tbilisi waxay bixisaa tartanka orodka tartanka. Ganacsiyo badan oo khamaar sharci darro ah.
1990 Ganacsiga khamaarku wuxuu helayaa sharci. Casino ugu horeysay «Ori Juja» in Tbilisi.
1991 Georgia waxay heshay xornimo. Dabeecada Sosbstvennoe ee ku saabsan khamaarka.
1992 Madaxweynaha Zviad Gamsakhurdia wuxuu soo saaray qawaaniinta ugu horeysa "hagaajinta sharciyada bakhtiyaanasiibka iyo khamaarka kale ee Jamhuuriyadda Georgia." Soo saarista shatiyadaha casino.
2000 Madaxweynaha Eduard Shevardnadze ayaa soo saaray sharci lagu mamnuucayo khamaarka. Mashruuca waa la diiday. Waqtigan xaadirka ah Georgia waxay ka shaqeysaa in ka badan 20 casinos, 18 ka mid ah ayaa ku sugan Tbilisi.
2002 Sharciga 1426-Sun "Iyadoo lagu saleynayo soo saarista rukhsadaha iyo rukhsadaha ganacsiga." Shuruudo cusub oo lagu bixinayo rukhsadaha iyo rukhsadaha.
2003 Eduard Shevardnadze, wuxuu mar kale isku dayaa inuu mamnuuco ganacsiga khamaarka, laakiin waxaa ku guuleystay madaxweyne Mikheil Saakashvili sanadkii 2004. Kali lahaanshaha gobolka ee bakhtiyaanasiibka.
2005 Sharciga № 1180 "Ururinta bakhtiyaa-nasiibka, khamaarka iyo ciyaaraha kale ee faa'iidada leh." Waxay ku shaqeysaa ilaa maanta, iyada oo wax ka beddello fara badan lagu sameeyay.
2014 Waddanku wuxuu leeyahay 94 shirkado khamaar. Inta badan casinos-ka furan iyo dukaamada sharadka ee Tbilisi, Batumi iyo Kutaisi way raacaan. Marka laga soo tago muwaadiniinta reer Georgia ee ka mid ah agaasimayaasha muwaadiniinta Ruushka, Turkiga, Armenia iyo Boqortooyada Ingiriiska.
2000 - 2017 Khamaarka internetka. Ku dhowaad dhammaan casinos-ku-saleysan dhulka, oo leh rukhsad rasmi ah, oo ku furaya boggooda internetka ciyaaraha internetka. Ciyaaraha wadayaasha caalamiga ah si xor ah ayaa loo heli karaa.
(Macluumaad laga soo qaatay buugaagta Eugene Kovtun "Xiisaha waddanka Soofiyeeti")
Waxay u badan tahay, in mustaqbalka fog ee Georgia la soo saari doono sharci qabyo ah oo ku saabsan khamaarka khadka tooska ah ee shirkadaha ajaanibta ah. Iyagu waa isku xiraha ugu liita arrinta xakamaynta khamaarka gobolka. Casinooyinka dhulka iyo khadka tooska ah waxaa waajib ku ah inay si taxaddar leh u hubiyaan ciyaartoydooda da'da qaan-gaarka, iyo sidoo kale inay horumariyaan nidaam lagula dagaallamo ciyaaraha zavisimostyu- Gamblers.
Waxaa jira casino ku saleysan dhulka Georgia? Ku raadso sidoo kale qaabka khadka tooska ah. Abaabulka casinos-ka khadka tooska ah iyada oo aan lahayn analog ku filan oo dhul leh liisan ansax ah oo ku saabsan dhulka Georgia waa la mamnuucay. Taasi waa, haddii aad ka ciyaareyso hawlwadeenka Joorjiyaanka ah ee Joorjiya ma laha casinaan isku magac ah - sharci maaha;
Waxaad ka ciyaari kartaa khamaaris caalami ah oo caalami ah, oo leh shati u gaar ah. Ma ahan mid ka soo horjeedda sharciyada. Hawlwadeennada caalamiga ah looma xannibo, sida ay u dhacdo, tusaale ahaan, Xiriirka Ruushka.
Xulo casiin online ah . Sidee loo ilaaliyaa naftaada markaad dooranayso hawl wade caalami ah? Ka faa'iideyso liiskayaga casinos-ka lagu kalsoon yahay. Waxay ku taal sadarka midig.
Xaaladaha waxbarashada . Baadh dhammaan macluumaadka ku yaal bogga internetka ee khadka tooska ah ee internetka (shuruudaha liisanka ee deebaajiga iyo kala-bixida, gunnooyinka iyo khamaarka haddii ay jirto jawaab celin ka socota khamaarka (sheekeysiga khadka tooska ah, cinwaanka, lambarrada taleefanka).
Akhri cayaaraha cayaaraha ku saabsan kheyraadkan internetka ee shabakadda. Xusuusnow, dib u eegista oo dhan maahan mid dhab ah, waana la habeyn karaa.
Wadahadaladii Money . Maxay yihiin khamaarka bixiya ikhtiyaarrada ku darista ama ka noqoshada lacagaha? (By WebMoney, kaararka amaahda iyo kaararka debitka ee loo maro Visa, Yandex, iwm.) Maxay yihiin shuruudaha ka bixitaanka lacagaha? Maxaa adiga kugu habboon?
Noocyada cayaaraha . Maxay yihiin noocyo kala duwan oo ciyaaro ah oo la bixiyo, casinokan? Ma jiraan wax adiga kugu habboon oo aad jeceshahay?
Ciyaaro bilaash ah . Marka fursada aad ku ciyaarayso qaabka ugu horeeya ee tijaabada, iskuday inaad sameyso. Kaliya "duubka". Marka way kala cadaan doontaa haddii aad ciyaarto iyo haddii ay ku habboon tahay sida. Intaas waxaa sii dheer, ciyaaraha qaarkood, sida baccarat ama keno ma ahan wax la aqbali karo in xeerarka la sii akhriyo ka hor. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad wax ka barato kala duwanaanshaha suurtagalka ah iyo ciyaarta istiraatiijiyadeed ee kaa caawin kara inaad si fiican u xakameyso oo aad u kharash gareyso bankroll-kaaga.
Georgia waxay ku taal Bariga dhow, waxay leedahay marin ka soo baxa Badda Madow. Dowladaha deriska ugu dhow waa Ruushka, Armenia, Turkiga, Azerbaijan.
Dhulka hadda jira ayaa dad badani ku noolaa xitaa halkan Millennium II BC Da'da Dahabiga ah ee Georgia waxay ka dhacday boqortooyadii boqoradda Tamara qarniyadii XII-XIII. Ilaa ay dowladdu si isdaba joog ah u kala jabisay waqtiga hadda jira, waxay galaysaa dagaalka, isbahaysiga militariga iyo siyaasadeed. Tilmaamahooda xaadirka ah ee la helay 1918. Sanado badan ayaa ku xigay USSR.
Sannadkii 1991-kii, ka dib burburkii Midowgii Soofiyeeti, Georgia waxay xorriyadda qaadatay mar labaad, waxayna 1992 ku biirtay Qaramada Midoobay. Maanta, dalku wuxuu hoy u yahay ku dhowaad 4.5 milyan oo qof. Isagu waa madaxweyne Giorgi Margvelashvili iyo raiisel wasaare - Irakli Garibashvili.
Quduuska Quduuska Quduuska ah ee Tbilisi . Tani waa magaca Kaniisadda Quduuska ah ee Katidral ee Tbilisi. Goobta: Georgia, Tbilisi, Elia Hill. Kaniisadda dhalinyarada ee Orthodox, oo uu naqshadeeyay Archil Mindiashvili - mid ka mid ah dhismooyinka ugu quruxda badan Tbilisi.
Nerikala . Cinwaanka: Mount Mtatsminda oo ku yaal Tbilisi. Jajabka ugu da'da weyn ee dhismaha qalcadda ayaa iska leh qarnigii IV.
Turtle Lake . Goobta: cirifka woqooyi ee Mount Mtatsminda, 3 km u jirta Tbilisi. Meel dalxiis oo caan ah, oo ah gaariga fiilada.
Anchiskhati . Cinwaanka: st. Shavteli, 9, Tbilisi. Kaniisadda ugu da'da weyn ee Georgia ee dalka, oo dib ugu jirtay qarnigii VI. Sida laga soo xigtay halyeeyga, waxaa la dhisay xitaa boqorka Iberia Villas Udzharmeli.
Keshvati . Cinwaanka: Shota Rustaveli, Tbilisi .. Kaniisada Orthodox ee St. George horraantii qarnigii labaatanaad.
Georgia - waa magac waddan, kaas oo ka yimid afka Carabiga. Is-magacaabiddu waa Sakartvelo.
Iberia - waxay ahayd magaca dhulkii Georgia qarnigii IIIaad ee miilaadiga. e. Maanta waa magaca Isbaanishka, tanina maahan wax shil ah. Awoowayaasha Isbaanishku waxay ka yimaadeen Georgia. U gaarka ah Yurub, luuqada Basque waxay lamid tahay Joorjiyaanka.
Luuqada Ruushka aad ugama caan aha wadanka, waxaa laga fahmaa inta badan dadka da'da ah. Dhallinyarada aan reer Ruushku si fiican ugu maarayn Ingiriisiga.
Xeerka khamaarka ee Georgia wuxuu ku hawlan yahay dakhliyada adeegga - hay'ad gaar ah oo hoos timaadda Wasaaradda Maaliyadda. Ujeeddadeedu waa in la abuuro jawi ku habboon ganacsiga, iyo sidoo kale sameynta cashuur fudud oo cad oo ku saabsan khamaarka.
Abaabulka khamaarka ee Georgia, ganacsaduhu wuxuu dooran karaa hal ama in ka badan aagagga shaqada waxaa ka mid ah casino, mashiinnada ciyaarta, ciyaaraha miiska, sharadka isboortiga, bingo, lotto iyo lotteries. Bixinta ruqsadaha, iyo sidoo kale sharciyeynta iyo xakameynta qabanqaabiyaasha khamaarka ayaa xambaarsan Adeegga Dakhliga (Maamulka Canshuuraha iyo Maamulka Canshuuraha).
Sharci ahaan, dhammaan rukhsaddaha lagu furan karo khamaarka Georgia waxaa lagu heli karaa qaab elektiroonig ah, looma baahna in laga qaybgalo maamulka canshuuraha. Dukumiintiga wuxuu shaqeynayaa shan sano hoolalka mashiinka khamaarka, xafiisyada sharadka ama shirkadaha leh bingo ama bingo, iyo hal sano oo ku saabsan bakhtiyaanasiibka. Shirkadaha helay ogolaanshaha casino ama boosaska, waxay codsan karaan dukumintiga si gooni gooni ah oo loogu talagalay ciyaaraha desktop-ka. Wuu ansax noqonayaa ilaa inta uu ka imaanayo xalka ugu weyn.
Sharcigu wuxuu bixiyaa kharashyo sanadle ah iyo saddexdii biloodba noocyada khamaarka. Lacagta sanadlaha ah ee rukhsadda - waa qaddar go'an oo lagu bixiyo si isle'eg oo isle'eg si joogto ah. Saddexdii biloodba mar ayaa afar jeer lagu oogayaa shay kasta oo khamaarka loo isticmaalo. Qaddarkoodu wuu kala duwan yahay iyadoo kuxiran goobta khamaarka iyo gobolka ay ku taal hay'addu.
Canshuuraha ayaa aad u kala duwanaansho. Kuwaan badankood waxaa saameeya goobta hay'addu ku leedahay, tusaale ahaan, canshuuraha Tbilisi, aad ayey uga badan yihiin meelaha kale, laakiin xiisaha khamaarka ayaa ka sarreeya. Oggolaansho inaad ka furto halkan casino halkan Georgia waxay bixin doontaa GEL 5 milyan sanadkiiba boosaska -. GEL 1 milyan Milkiilaha khamaarka maxalliga ah inuu furo seddex ka mid ah ciyaaraha naadiyada iyada oo aan canshuur sanadle ah laga qaadin gobolka, sida mashiinnada ciyaarta - isla naadiga.
Qaar ka mid ah casinos-yada Georgia ayaa si buuxda looga dhaafay lacagaha sannadlaha ah. Batumi, Kobuletti, Khelvachauri, Anaklia iyo Ganmukhuri ma bixin karaan canshuurta, iyagoo ka dhisaya 80 ilaa 100 qolal huteel oo u dhow. Gobolka Gudauri, Kazbegi, Bakuriani, Tskaltubo iyo Sighnaghi casino ayaa gebi ahaanba laga xoreeyay. Sawirka midabka buluuga ah wuxuu tilmaamayaa hay'adaha hela gunooyinka 100+ qolal la dhisay, casaan - 80+ qolal, cagaar - xaaladaha oo dhan.
canshuurta dakhliga shaqsiga (mushaharka) - 20%;
canshuurta guryaha - illaa 1%;
Canshuuraha dakhliga shirkadaha - 15%;
canshuurta mas'uuliyadda, oo la qabtay intii lagu jiray tartanka - 20%.
Naadiyada ciyaaraha desktop-ka, hoolalka makiinadaha ciyaarta iyo buugaagta isboortiga oo laga sii daayay waajibaadka saarista diiwaanka lacagta caddaanka ah ee xisaabaadka. Waa inay adeegsadaan kaliya haddii aad bixiso adeegyo dheeri ah, sida iibinta cabitaannada ama cuntada.
ogolaanshaha waqtiga ganacsiga ciyaarta Georgia - 20 maalmood. Waxaad ku heli kartaa bilaash. Haddii dukumeentiga loo baahan yahay si deg deg ah, waxaa suurtagal ah in la bixiyo GEL 400 ($ 160) - waxay ku diyaar garoobi doontaa 10 maalmood gudahood, GEL 800 (320 $) - 5 maalmood ama GEL 2 kun ($ 800.) - muddo 1 maalmood ah.
Ogolaansho gooni ah oo loogu talagalay abaabulka casinos-ka khadka tooska ah lama soo saaro, sida mashaariicda noocan oo kale ah waxay kaliya u noqon karaan milkiileyaasha hay'adaha dhabta ah ee haysta liisan. Waxay xaq u leeyihiin inay ku maareeyaan goobta khamaarka, boosaska, sharadka isboortiga iyo bakhtiyaanasiibka. Tartamayaasha ajnebiga ah ee aysan u hanjabin - shirkadaha shisheeye ee sharcigu waa ka mamnuuc khamaarka Georgia, sidaas darteed suuqa rajo leh ayaa gebi ahaanba bilaash u ah ganacsatada maxalliga ah.
Marka loo eego natiijooyinka hawlgallada bogagga noocan ah waxay bixiyaan khidmado saddexdii biloodba mar ah. Cabirkooda waxaa go’aamiya maamulka deegaanka. Way ku kala duwan tahay inta udhaxeysa 30-60 kun GEL. ($ 12-24 kun.). Intaas waxaa sii dheer, waxay uruurisay canshuuro dheeri ah kor ku xusan.
Waqtigan xaadirka ah Tbilisi waxay soo saartay 3 ogolaansho Batumi - 11 (afar ka mid ah machadyadooda oo dhawaan dhisay qol hudheel ah) Tshaltubo - 5 iyo Kazbegi - 1. Marka, qolka mashiinka wax lagu kala iibsado ee 72 wuxuu si rasmi ah ugu shaqeeyaa sharciyada ciyaaraha Georgia 107 dukaanno lagu ciyaaro, shirkadaha leh 3 bingo ama Lotto, 41 iyo 3 naadi qamaarka bakhtiyaa-nasiibka.
Dhammaan macluumaadka la siiyay tifaftirka Wararka Khamaarka wuxuu u mahadcelinayaa Theon Shiukashvili - Adeegga Sare ee Dakhliga Georgia. Waxay ku soo bandhigtay ciyaaraha Georgia Congress sida afhayeen, wuxuu leeyahay toban sano oo khibrad ah hay'adaha canshuuraha qaranka wuxuuna mas'uul ka yahay soo saarista rukhsadaha urur khamaarka Georgia.
Markii ay xornimada qaadatay, Georgia waxay isu xil saartay inay kor u qaaddo warshadaha ciyaaraha. Mawqifka juquraafi ahaan wanaagsan, maqnaanshaha sharciga mamnuuca khamaarka, iyo sidoo kale u daacad ahaanshaha warshadaha ciyaaraha inta badan xoogagga siyaasadeed, heerka hoose ee musuqmaasuqa, fudeydka ganacsiga, xaaladaha raaxada leh ee canshuuraha waxay bixiyaan khamaarka Georgia tiro faa'iidooyinka.
Sharciga Georgia ee hadda jira wuxuu awood u siinayaa sharci ahaan dhammaan noocyada waxqabadyada khamaarka. Ka mid ah noocyada waaweyn - casino, ganacsiga buug-gacmeedka (oo ay ku jiraan sharadka), bakhtiyaa-nasiibka, mashiinnada mashiinnada lagu ciyaaro, naadiyada khamaarka. Qaybta khadka tooska ah, sharcigu wuxuu oggol yahay abaabulka khamaarista, khamaarista iyo qamaarrada mashiinnada lagu ciyaaro.
Sharciga Georgia "On abaabulka bakhtiyaa-nasiibka, khamaarka iyo ciyaaraha faa'iidada leh" laga bilaabo 25.03.2005 №1180;
Sharciga Georgia ee "Ruqsadaha iyo Ruqsadaha" ee ku taariikhaysan 24.06.2005 №1775;
Sharciga Georgia "Khidmadaha shatiyeynta iyo shatiyeynta" laga bilaabo 12.08.2003 №2937;
Sharciga Georgia "On ururinta khamaarka" laga bilaabo 29.12.2006 №4250;
Amarka Wadajirka ah ee Wasiirka Maaliyada iyo Wasiirka Arimaha Gudaha ee Georgia "Ansixinta shuruucda milkiilayaasha imtixaanka waxqabadka waxay fasaxaysaa khamaarka iyo ciyaaraha kale ee faa'iidada leh" laga bilaabo 14.12.2011 №611-1013;
Amarka Madaxa Adeegga Kormeerka Maaliyadeed ee Georgia "Ansixinta Sharciga" Nidaamka iyo shuruudaha helitaanka macluumaadka, nidaaminta, Adeegga Kormeerka Maaliyadeed ee Georgia iyo gudbinta abaabulayaasha bakhtiyaa-nasiibka, khamaarka iyo ciyaaraha kale ee faa'iidada leh “Iyo” Amarka iyo xaaladaha helitaanka macluumaadka, nidaaminta, adeegga kormeerka dhaqaalaha ee howlaha Georgia iyo gudbinta khamaarka “laga bilaabo 28.07.2004 №94.
Bixinta rukhsadaha khamaarka ayaa xambaarsan Adeegga Dakhliga ee Georgia. Deeq qaataha waa inuu ku soo gudbiyaa dukumintiyada lagama maarmaanka ah foomka la marsiiyey iyadoo la kaashanayo bogga internetka IRS.
Go'aanka qaataha wuxuu doortaa gudbinta muddada dukumiintiga iyadoo kuxiran sharciga dejinta go'an ee 1 maalin shaqo - GEL 2 kun / $ 830, 5 maalmood - GEL 800 / $ 330, 10 maalmood - GEL 400 / $ 365, 20 shaqaale. maalmo - bilaash ah
marka laga hadlayo abaabulka sharadka - dukumenti xaqiijinaya bixinta sanduuqa abaalmarinta oo aan ka yarayn 10 kun GEL / $ 4, 15 kun.;.
marka la eego abaabulka guud ee qaab elektaroonigga ah (ciyaarta khadka tooska ah) - amarka ciyaarta elektaroonigga ah, oo ay tahay in lagu caddeeyo: cinwaanka dhabta ah ee laga maamuli doono ciyaaro faa'iido leh iyo ururkooda, liiska iyo liiska ciyaaraha, goobta (yaasha) iyo waqtiga kama dambaysta ee bixinta, macluumaadka ku saabsan mamnuuca ciyaarta ee shaqsiyaadka da'doodu ka yar tahay 18 sano.
Si aad u abaabusho oo aad u sameysid ciyaaro nasiib ah internetka (khadka tooska ah) qabanqaabiyaha ciyaarta, waa inaad fasax u haysataa "dhulka" ciyaarta (khadka tooska ah). Ka dib markii la helo rukhsadda ciyaarta offline, milkiilaha rukhsadani wuxuu xaq u leeyahay inuu ka codsado Adeegga Dakhliga Gudaha ee Georgia rukhsad si uu u fuliyo ciyaaraha khadka tooska ah iyadoo la siinayo liiska dukumiintiyada kor ku xusan.
Bixinta bixinta rukhsadaha ee abaabulka khamaarka Georgia waxaa la qabtaa sanadkiiba. Ugu horreyn, deeq-bixiyuhu wuxuu bixiyaa sanadka ugu horeeya ee hawlgalka, ka dibna sannad kasta cusbooneysiinta oggolaanshaha adoo samaynaya lacag bixin kale.
Kharashka ugu hooseeya ee rukhsadda si loogu fuliyo nashaadaadyo khamaaris hay'ado abaabula noocan oo kale ah ganacsiga meelaha dalxiiska. Siyaasaddan waxaa loogu talagalay horumarinta kaabayaasha dalxiiska Georgia.
Gaar ahaan, heerka mushaarka sanadlaha ah ee oggolaanshaha abaabulka khamaarka Batumi waa 250 kun GEL / $ 103.6 kun, halka Tbilisi - .. GEL 5 milyan / $ 2 072 250. Xaaladdan oo kale, haddii qofka qaata uu haysto ogolaansho si loo abaabulo casinos ee Batumi iyada oo la dhigayo xarun ku taal aagga hudheelka cusub ee la dhisay iyada oo ay joogaan ugu yaraan 100 qol, waa laga dhaafay bixinta oggolaanshaha illaa 10 sano. Intaa waxaa dheer, rukhsad ayaa lagu siiyaa bilaash hay'adda casino ee Kazbegi degmooyin degmooyin, Tskhaltubo, Sighnaghi.
Xaaladda waxay la mid tahay cabirka guddiga si loogu oggolaado in lagu sameeyo noocyo kale oo khamaar ah (bakhtiyaa-nasiibka, sharadka isboortiga, naadiyada khamaarka). Tusaale ahaan, khidmadda ruqsadda si loogu abaabulo buug sameeyaha Tbilisi waa GEL 200 kun / US $ 8.3 kun sanadkii, halka aagga degmooyinka maamulka ee Batumi, Kutaisi, Rustavi -… Dhamaan 80 kun GEL / $ 33.2 kun . sanadkii.
oo leh mashiin kasta oo naadi - GEL 1,5-3 kun.;
oo leh miis walba oo casino ah - GEL 15-30 kun.;
oo leh naadi khamaar miis kasta - GEL 3-10 kun.;
ciyaar kasta qaab qaab elektaroonik ah - GEL 30-60 kun.;
oo leh diiwaangelin kasta oo lacag ah ama faa'iido u leh ciyaaraha khamaarka ee foomka nidaamka elektaroonigga ah, oo ku yaal meel ka baxsan shayga la abaabulay, sida ku xusan qaraarka, ciyaaraha fursadaha ama faa'iidada leh - GEL 1-1,5 kun.;
oo leh sawir kasta oo xayeysiis ah - 10% abaalmarinta abaalmarinta.
Qofka haysta rukhsadda, oo aan si sax ah u fulin shuruudaha qandaraaska ee lagu soo rogay ganaax iyo shuruud aasaasi ah oo lagu hagaajinayo hawlaheeda iyada oo la raacayo shuruudaha rukhsadda ee loo baahan yahay, muddada xaddidan ee uu jidhku soo saaray rukhsadda. Ganaaxyada GEL way ku kala duwan yihiin kun. ilaa 10 kun. / $ 415-4150.
Haddii qofka rukhsadda haysta, ee loo cayimay waqtigiisa inuu ku keeno shuruudaha oggolaanshaha qadka aan la fulinin shuruuddan, waxay ku soo rogtay ganaax labaad oo ah qadarka saddex jeer. Haddii ka dib dhammaadka waqtiga kama dambaysta ah, oo lagu soo rogo ganaaxa labaad ee maalin ganaax ah, qofka haysta rukhsadda uusan buuxin shuruudaha rukhsadaha, qaddarka ganaaxa waa la labanlaabmayaa. Haddii sarkaalka heysta rukhsadda uusan dhaqangelin doonin shuruudaha rukhsadda, go'aanka ka noqoshada oggolaanshaha.
Awooddeeda, hay'adaha maamulka waa inay ilaaliyaan oo ay adeegsadaan qaababka jawaab-celinta maamul ee ku-xadgudubka maadooyinka howlaha khamaarka. Caadi ahaan waxay hubinayaan Adeegga Dakhliga ee laxiriira bixinta canshuuraha iyo waqtiga saxda ah. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa xakameysa fulinta shuruudaha sharciga ee ku saabsan helitaanka aaladaha xarun kasta oo dabagal ah. Sidoo kale la kormeerida u hogaansanaanta shuruudaha hawlwadeenka ee khuseeya ganaaxyada bixinta waqtiga (haddii la saaray). Shayga muhiimka ah ayaa ah in la bixiyo tijaabinta ciyaartooyda ciyaarta lacagta kaashka ee deynta dulsaarka dulsaarka, taas oo si adag loo mamnuucay sharciga. Haddii xadgudubyada noocaas ah la caddeeyo, qofka heysta rukhsadda abaabulka khamaarka wuxuu bixin doonaa ganaax weyn. Haddii ay dhacdo soo noqoshada xadgudubkani waa suurtagal in laga noqdo maamulka mas'uuliyadda ciqaabta ee aasaaska khamaarka.
Georgia - waddan leh siyaasad canshuura oo hufan oo hufan, oo leh culeys canshuur yar.
Waxqabadka buugaagta ee Georgia waxaa lagu canshuurayaa qaab hawl wadeen kasta oo rukhsad u haysta qabashada noocaan oo kale ah, uu ku bixiyo 5% qiimaha VAT. Culeyska canshuurtani muhiim uma aha qofka haysta rukhsadda. Si kastaba ha noqotee, wakiillada ganacsiga sharadku waxay u janjeeraan inay ka fikiraan in sida ugu wanaagsan ay u noqon karto canshuur 15-20% ah faa'iidada guud ee khamaarka.
Muranku waa xaaladda canshuuraha waxqabadyada kale ee ku saabsan khamaarka (casinos, bakhtiyaa-nasiibka, iyo wixii la mid ah. N.). Hay'adaha ganacsigu waxay bixiyaan canshuurta xaddiga 15% ee dakhliga saafiga ah ee waxqabadyadooda. Marka, waxay ku jiraan xaalado la mid ah shirkadaha kale ee ganacsiga ee ku yaal dhulka Georgia - kuwani waa dhaqdhaqaaqyo aan la xiriirin bixinta adeegyada warshadaha khamaarka.
Qodobka 35aad ee Sharciga Georgia "Abaabulka bakhtiyaa-nasiibka, khamaarka iyo cayaaraha faa'iidada leh" wuxuu dejinayaa xayiraadyo dhowr ah oo ku saabsan oggolaanshaha milkiilaha inuu ku sameeyo khamaar. Tusaale ahaan, lama oggola bakhtiyaanasiibka abaabulka khamaarka iyo ciyaaraha faa iidada leh (marka laga reebo bakhtiyaanasiibka xayaysiinta), iyo sidoo kale iibinta / qaybinta tigidhada bakhtiyaanasiibka, khamaarka iyo ciyaaraha faa iidada leh (marka laga reebo tigidhada bakhtiyaa-nasiibka xayeysiiska ah) ee carruurta iyo xarumaha caafimaadka cibaadada, xarumaha caafimaadka ee carruurta, maktabadaha, matxafyada, dhismayaasha xafiisyada dawladda iyo kuwa maxalliga ah, iyo sidoo kale meelaha ay mamnuuceen maamulka degmadu.
Nidaam dheeri ah oo loogu talagalay mas'uuliyadda bulshada ee wadayaasha khamaarka ayaa ah in la xakameeyo qaddarka lacagta caddaanka ah ee kaqeybgalayaashu ku qaataan khamaarka, laga bilaabo Adeegga Kormeerka Dhaqaalaha ee Georgia. Abaabulaha kasta oo ka mid ah ciyaarta nasiibku wuxuu ku qasban yahay inuu ogeysiiyo wakiillada dadka adeegga, kuwaas oo ku bixiya khamaarka in ka badan GEL 3 kun. / $ 1243 maalintii. Adeegga aan siin macluumaadkan hawlwadeenka waxaa lagu ganaaxi karaa qadarka GEL laga bilaabo 2-6 kun. / $ 830-2490. Waxaa mudan in fiiro gaar ah loo yeesho Adeegga Kormeerka Maaliyadeed ee waxa loogu yeero liiska madow - liiska dadka laga mamnuucay inay ka qeyb galaan khamaar kasta ee ka dhaca dhulka Georgia. Liiskan ayaa inta badan ka kooban wakiillo ka socda kooxo argagixiso oo caalami ah iyo kooxo dambiilayaal ah.
Dhowr sano Georgia waxaa ka socda doodo ku saabsan baahida loo qabo in laga mamnuuco xayeysiiska khamaarka telefishanka, raadiyaha iyo warbaahinta kale. Laakiin hadda fekerka ku saabsan saameynta xun ee xayeysiinta noocan oo kale ah kama helin taageerada guud ahaan dadweynaha.
3 Georgia Online - Khamaarka Georgia
3.0.1 Khamaarka khadka tooska ah ee Georgia - taariikhda taariikhiga ah
casino 'mandarin fadar' cashuur-dhaaf ah oo bilaash ah 2020